Tag: Atiny mailaka | Martech Zone
Tag: Votoatin'ny mailaka
Dinika iray ataoko isan-kerinandro miaraka amin'ny mpanjifa dia ny fomba mahakivy amin'ny fananganana sy fanohanana programa marketing amin'ny mailaka mahomby. Raha tsorina, rehefa mihalehibe ny lisitry ny varotra mailakao, dia mitombo koa ny aretin'andoha. Toa nanary ny fanantenana ny fanomezana fomba fanao tsara indrindra ny mpanome tolotra internet ary manana algorithme moana izay manohy manasazy ireo mpandefa tsara. Raha ny zava-misy dia nahita ny iray tamin'ireo mpiara-miasa tamiko tao amin'ny orinasa Yahoo! manakana 100%
Tsy toy ny fisedrana A / B nentim-paharazana, ny fitsapana A / x an'ny Mailjet dia mamela ny mpampiasa hampitaha amin'ny endriny 10 isan-karazany ny mailaka andrana nalefa mifototra amin'ny fifangaroana hatramin'ny efatra lehibe: Andalana lohateny mailaka, Anaran'ny mpandefa, valin'ny anarana, ary ny atiny mailaka. Ity fampiasa ity dia ahafahan'ny orinasa mizaha toetra ny fahombiazan'ny mailaka alohan'ny handefasana azy any amin'ny vondrona mpandray betsaka kokoa, ary manolotra fahitana azon'ny mpanjifa ampiasaina hampiasa an-tanana na hisafidy ho azy ny mailaka mahomby indrindra